Phupha ngeBassgeige Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Iphupha malunga nevayolin isezantsi. Ukufunda intsingiselo yamaphupha kunokukunceda ukuba wazi iinkalo ezithile zobomi. Kwesi sikhokelo sikubonisa indlela yokutolika amaphupha akho ngokwembono yengqondo neyokomoya.
Ivayolin yeBass lelinye igama leebhasi ezimbini. Sesona sixhobo sineentambo sikhulu yaye, nomzimba waso omkhulu ongxolayo, sikhupha awona manqaku aphantsi. Kwii-orchestra ze-symphony, ezine, ngamanye amaxesha iintambo ezintlanu ze-bass violin zithotywe ngesaphetha; kwi-classic rock 'n roll kunye nejazz zinamachaphaza. Ngenxa yobunzima baso, imvumi ayisibambi isixhobo, iphumla ngonyawo olunye yaye imvumi ime ecaleni kwayo okanye ihlale kwisitulo esiphakamileyo.
Nabani na ophupha i-bass violin unokuvuya ngomculo. Ukuba ukutyelelwa kwekhonsathi kucetywayo okanye kubanjwe kutshanje, iphupha linokuhambelana nale nto. Ubudlelwane kunye nemeko yobomi yangoku kunye nesimo sengqondo somphuphi sisigqibo sokuchazwa kwephupha.
1 Uphawu lwephupha «ibass violin» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ibass violin» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-bass violin» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibass violin» - ukutolikwa ngokubanzi
I-bass violin sisixhobo esithi, nangona ubukhulu bayo, sidlalwa ngovakalelo olukhulu. Kwintsingiselo yemveli yamaphupha, ifanekisela a Isibhengezo sothando kumntu olalayo. Nangona kunjalo, uphawu lwephupha kwangaxeshanye lunokutsalela ingqalelo kwinto yokuba aluhambelani neemvakalelo ngendlela efanayo.
Umfanekiso wephupha nawo ufuzisela a ibhalansi tension kunye nokuphumla. Ngokutsho kohlalutyo lokulala, i-bass violin ibonisa umphuphi indlela yokufezekisa imvisiswano kunye nokwaneliseka kwangaphakathi. Mhlawumbi uzama ngamandla ukugqwesa kunye nokuqatshelwa. Kufuneka ubuyekeze uxinzelelo olunxulumene nemisebenzi eyinzuzo kuwe.
Ukuchazwa ngokubanzi kwamaphupha, kunomdla ukuba umntu olele udlala i-bass violin ephupheni okanye uphulaphule isixhobo. Ukuba wenza umculo ngokwakhe, isimboli sephupha simele ulonwabo kunye nokwaneliseka kwimeko yentsapho.
Ukuba umntu uva ephupheni indlela omnye umntu adlala ngayo i-violin ye-bass, iphupha livakalisa ulonwabo, kodwa kunye nokuzola kunye nokuphumla. Umphuphi unalo impumelelo yobungcali nto leyo ibangelwa bubuchule babo bonxibelelwano. Ngokutsho kokutolikwa okudumileyo kwamaphupha, isimboli sephupha elithi "bass violin" nangona kunjalo, isilumkiso sokuba ungabeki iinjongo eziphezulu kakhulu.
Uphawu lwephupha «ibass violin» - ukutolikwa kwengqondo
Izixhobo zomtya ziluphawu lwe Ijika lamabhinqa kunye neemvakalelo kuhlalutyo lwengqondo. Isaphetha se-bass violin sihambelana nelungu lesondo lendoda, elikhuthaza umanyano lwezesondo. Intsingiselo engakumbi yesimboli yephupha ixhomekeke kuhlobo lweentshukumo zokubetha ephupheni.
Ukuba umphuphi uyabona ukuba ukudlala i-bass violin ngumngeni, utyhila kwisimboli sephupha. uloyiko phambi kobuni bomntu naphambi kwesenzo sesondo ngokubanzi. Uziva uxhatshazwa ngokwesini yaye ucinezelekile ngokoqobo okanye uziva unetyala ngeminqweno yakho yethuku.
I-violin ye-bass kunye neethoni zayo ezinzulu zokugquma ibonisa, ngokutsho kohlalutyo lwamaphupha, izenzo zesondo ezinzima. I-subconscious ivula umntu olalayo ngophawu lwephupha: Ukuziva uyonwabile. Iphupha likwakubonisa ukungaqiniseki kwakho malunga nendlela iqabane elisabela ngayo kwiimfuno zakho ezivuselela inkanuko.
Isimboli sephupha "i-bass violin" ikwatyhila ulwazi olubalulekileyo malunga neemvakalelo zakho kumntu ophuphayo. Ukuba imvumi ishukumisa isaphetha sesixhobo ngokuthe ngcembe nangokuthantamisa ephupheni, oku kuyavakala imvisiswano kubomi bothando. Ngokutsho kokuchazwa kwengqondo yephupha, umfanekiso wephupha unokuphinda ubonise umnqweno wobudlelwane obunjalo.
Uphawu lwephupha «i-bass violin» - ukutolika kokomoya
Ngokwengcaciso yokuchazwa kwamaphupha okomoya, i-bass violin luphawu lwe amandla obomi kunye nokuhlaziywa.